Shirkii Dawlada Federaalka Ah Iyo Maamul Goboleedyada Soomaaliya Oo Burburay Iyo Nuxurka Shan Qodobo Oo Laysku Mari Waayey
Saturday May 11, 2019 - 17:15:57 in News by G. Good
Muqdisho(HWN):-Wararka ka imaanaya magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in shirkii halkaasi uga socday mas’uuliyiinta maamul goboleedyada iyo madaxada dowladda ferderaalka ee Soomaaliya uu fashil ku soo dhamaaday isla markaana wax heshiis ah aan laga gaarin arrimo dhawr ah oo la isku haystay.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmad Madoobe) ayaa noqday masuulkii ugu horreeyey ee subaxnimadii hore ee saakaba isaga dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe, halkaasi oo ay diyaarad u taagnayd tan iyo shalay galab. Axmad Madoobe ayaa toos u tagay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulkiisa.
1- Faragelinta Galmudug,Taas oo qaadatay 5 cisho , natiijo la,aana ku dhamaatay. Galmudug ayaa sheegtay in ay fara galin dawladdu ku hayso iyada oo dawladda Federaalka Madaxweynaha Galmudug u qabatay hal sano halka isagu ku doodayo in la doortay illaa 2021.
2- Xeerka Doorashooyinkaee ay xukumadda Muqdisho fadhidaa ansixisay oo ay maamul goboleedyadu ku doodayaan in aanu waafaqsaneyn Dastuurka Dalkaasi iyo heshiiskii baydhabo ee Dowladda iyo dowlad Goboledyada Jun 2018, taasina si adag baa Taas waa la isku mari waayay.
4- Deeqaha caalamiga-
Dowladda uu hogaamiyo Farmaajo ayaa wada dib u eegis ku aaddan dastuurka Soomaaliya iyadoo ay ka maqanyihiin xubnihii dawlad goboleedyada u matali laha guddiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka ,xubnahas oo Dawlad Goboleedyada magacaabeen laakin in ay shaqa galaan aan loo ogolaan, qodobkaasina khilaaf weyn kaa dhacay oo waa la isku afgaran waayay.